पाइलटको आग्रह कसैले मानेन, रहेनन् रबिन्द्र अधिकारी – Nepali News Portal – Trending Nepali News
पाइलटको आग्रह कसैले…
पाइलटको आग्रह कसैले मानेन, रहेनन् रबिन्द्र अधिकारी
१५ फागुन, काठमाडौं । बुधबार हेलिकप्टर दुर्घटनामा ७ जनाको ज्यान गएको छ। सवार ७ जनामा सबैजनाको ज्यान गयो। एअर डाइनेस्टीको एएस ३५० को हेलिकप्टर ताप्लेजुङको सिस्नेमा दुर्घटना हुँदा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सात जनाको निधन भएको छ । बुधबार मध्यान्ह साढे एक बजे दुर्घटनामा परेर मन्त्री अधिकारीसहित पर्यटन व्यावसायी आङ्गछिरिङ शेर्पा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुवदास भोछीभोय, प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, उपसचिव युवराज दाहाल, नेपाली सेनाका जमदार अर्जुन घिमिरे र क्याप्टेन प्रभाकर केसीको ज्यान गएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार र अनुसन्धान गर्दा, हेलिकप्टर खराब मौसमको कारणले दुर्घटना भएको देखिन्छ। १२ वर्ष अघिताप्लेजुङमा भएको अर्को हेलिकप्टर दुर्घटनाको कारण पनि खराब मौसम नै थियो । सदरमुकाम फुङलिङबाट अढाइ दिनको पैदल दूरीमा टाढाको घुन्सा दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न पुरावेदन अदालत पाटनका तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनकेशरीराज पण्डितको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले मौसमी खराबले हेलिकप्टर दुर्घटना भएको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
पण्डित कार्यदलले १८ मंसिर २०६३ मा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार दुर्घटनाका बेलामा ताप्लेजुङमा बादल लाग्ने र छिनछिनमा हल्का वर्षा भइरहेको थियो । घुन्सा क्षेत्रको भिजिबिलीटी पनि प्रष्ट थिएन । स्थानीय मौसमको ख्याल नगरी उडान भर्दा दुर्घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष शुत्रबाट जानकारी आए अनुसार, पाइलटले उड्नु अगावै, आज मौसम खराब छ नुडाउ भन्दा केहि मन्त्रीहरुले त जान्नी हुन्छस खुरुक्क हिड भन्ने जस्ता कुरा गरेका थिए अरे।
उक्त दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरुको शव घटनास्थलबाट निकाल्न कठिनाइ भएको छ । नेपाली सेनाका अनुसार खराब मौसमका कारण शव निकाल्न कठिनाइ भएको हो । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म हेलिकोप्टरले ल्याण्ड गर्न सकेको छैन ।
हाल सेनाको एमआई १७ र अर्को हेलिकोप्टर ताप्लेजुङको आकाशमा छ । ‘हेलिकोप्टर अहिलेसम्म ल्याण्ड हुन सकेको छैन । यद्यपि, डोरीको सहायताले सेनाको टोलीले ४ जनाको शव निकालिएको छ’, प्रवक्ता ढकालले भने, ‘हाल ती शवलाई ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलमा राखिएको छ ।’ थप ३ जनाको शवलाई मौसममा आएका खराबीका कारण निकाल्न सकिएको छैन । ढकालका अनुसार रात परिसकेकाले पनि उद्दारमा कठिनाइ भएको छ । हाल एयर डाइनेष्टी र सिम्रिक एयरको एक/एक वटा हेलिकोप्टर पनि त्यहीँ छ ।
विमानस्थलसम्म ल्याइएको ४ वटा शवलाई काठमाडौं ल्याउने प्रयास गरिए पनि मौसमका कारण त्यो सम्भव नभएको ढकालको भनाइ छ । ‘अब ७ जनाकै शवलाई संकलन गरेर बिहीबार बिहान मात्रै काठमाडौं ल्याउनछौं’, ढकालले भने ।
तयार हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो “नेपाल लोक स्टार” बन्न ? अडिसन कहिले?
३२ वर्ष पुगिन् प्रियङ्का,जन्मदिन मनाउँदै गर्दा भनिन् : जिम्मेवारी बढेको छ